Umthengisi kunye noMthengisi weenkonzo ezixabisekileyo Ngexesha
Iinkonzo ezongezwe ngexabiso Sebenzisa iinkonzo zethu zokongeza ixabiso ukwakha uphawu lwakho! Ukunyuswa kweBrand 1. Nceda ungeze ukuthengisa kunye nokugcina abathengi bakho. 2. Ukuphinda usebenze ngokutsha kwimveliso eyenziwe ngokwezifiso ...
Iinkonzo ezongezwa ngexabiso
Sebenzisa iinkonzo zethu zokongeza ixabiso ukwakha uphawu lwakho!
1. Nceda wongeze izinto ozithengisayo kwaye ugcine abathengi bakho.
2.Pakisha imveliso kwakhona kwibhokisi yokupakisha eyenziwe ngendlela oyithandayo.
3. Ukufakwa kunye nokudibana kunokuphucula ukuhambisa kwakho kunye nokwenza lula inkqubo yokuhambisa.
4. Ukulebhelisha yinkqubo enzima kodwa ebalulekileyo, ke siya kuyithathela yona kwaye sibeke iilebhile ngokufanelekileyo ukuqinisekisa ukuba iimveliso zakho ziyabonakala.
Inkonzo yokuThengwa kweeNkonzo
Kule marike iguquka ngokukhawuleza, ubomi bemijikelezo yobomi buye bufutshane kwaye bufutshane, abathengi banokukhetha iintlobo ngeentlobo zeemveliso, ixesha lokuthengisa libaluleke kakhulu, neliza kuchonga impumelelo yenkampani.
IiNkonzo ze-GZ ze-Ontime Supply Chain (i-SCS) zibonelela ngeenkonzo zokugqibela zokugqibela ze-OEM (uMvelisi wezixhobo zoqobo), i-ODM (uMenzi woYilo loqobo), i-EMS (uMboneleli weNkonzo yokuThengiswa kwe-Elektroniki) kunye nabavelisi bamacandelo e-elektroniki ukuze bakwazi ukwandisa ukubonelelwa kwayo ikhonkco.
Njengomhambisi wehlabathi, amakhadi ethu abanzi abonelela abathengi "ngama-stop-one" amava oyilo kunye nokubonelela ngeemfuno zekhonkco. Ubungcali kunye nezixhobo ezisetyenziswa liqela lethu lokuthenga likuvumela ukuba unciphise iindleko zokuthengwa kwezinto eziphathekayo, wandise imali yakho yokusebenza, kwaye wonwabele ubhetyebhetye bokufumaneka kwezinto ukwandisa isabelo sakho sentengiso kunye nenzuzo.
Iinkonzo ze-arhente yokuhlawula nokuthenga
Inkonzo yearhente yokuhlawula urhwebo
Sinokubonelela ngenkonzo yokuhlawula yasimahla kumzi-mveliso.
1688.com/taobao.com/jd.com inkonzo yearhente yokuthenga
Sinxibelelana nomthengisi kwaye sixoxa ngentengiso egameni lakho
I-Taobao kunye nezinye iiwebhusayithi zaseTshayina azamkeli iPayPal! Sikuvumela ukuba uthumele intlawulo nge-PayPal, emva koko sisebenzise umboneleli wentlawulo waseTshayina ukuhlawula umboneleli! Ukubonelela ngokhuseleko olukhulu xa uthenga kumthengisi waseTshayina!
Sebenzisa iminyaka yethu emininzi yamava okuthenga eTaobao, siya kukubonelela ngengcebiso ngokusebenza komthengisi kunye nezinye iingcebiso zeTaobao ...
Sinokubonelela ngokuthengwa kwemveliso, iarhente, uhlolo, ukuthuthwa kwehlabathi, ukuba uyafuna, sinokukunika ezinye iinkonzo.
Egqithileyo Ummeli wokuwisa